Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay soo celiyaan DTK Mac mini A12Z | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay codsatay dadka haysta DTK ee Mac mini A12Z Bionic processor tijaabiyeyaasha si ay ugu soo celiyaan xirmada $ 200 foojar qiimo jaban. Ilaa hadda, ma jiraan wax aan caadi ahayn. Shirkaddu waa inaysan ku maaweelin in noocyada Apple Silicon-ka ah ay socdaan, waxayna dooneysaa inay soo ceshato.
Waxyaabaha "baashaalka" (haddii aadan ka mid ahayn "kuwa nasiibka leh", dabcan) arrintu waa in horumariyeyaasha maalintooda ay heleen noocgan, ay bixiyeen 500 Dollar. Markaa barnaamijyada mudnaanta leh ee Apple Silicon ku yeelan kara wejiga tijaabada cid kale ka hor, sacab $ 300 haddii ay ku celiyaan aaladda shirkadda, ka dib lix bilood oo la isticmaalay.
Ka dib markii lagu dhawaaqay mashruuca Silicon Apple Bishii Juun ee sanadkii hore, Apple waxay siisay qaar ka mid ah horumariyayaashu qalabkii kala-guurka ee barnaamijka oo ay ku jiraan Mac mini oo ku qalabaysan A12Z Bionic chip oo markii ugu horreysay loo adeegsaday iPad Pro, 16GB RAM, 512GB SSD, laba dekedood. USB-C, laba USB - Dakado iyo hal deked HDMI 2.0 ah.
DTK-yadaani waxaa si kumeel gaar ah loogu deeqay qaar ka mid ah horumariyeyaasha oo iyagu lacagta bixiyay 500 Dollar by noocooda yiri. Ujeedada shixnadahaani waxay ahayd in la siiyo horumariyeyaasha qalab ay ku tijaabiyaan barnaamijyada cusub ee loo yaqaan 'Mac' oo leh processor 'ARM', halkii ay ka ahaan lahayd Intel-ta jirtay ilaa maanta.
Apple waxay hadda weydiisaneysaa barnaamijyada soo iibsaday nooca noocaas ah inay dib ugu celiyaan shirkadda si loogu beddelo lambar qiimo dhimis ah 200 Dollar iibsashada Mac M1 cusub. Nambarkan waa in la adeegsadaa ka hor 31-ka Maajo.
Waxay umuuqataa in warku uusan jeclayn kuwa soosaarayaasha ah ee leh qalabkan. Apple waxay u sheegtay maalintooda in tijaabooyinku socon doonaan hal sano. Toddoba bilood oo keliya ayaa ka soo wareegtay oo waa inay mar hore soo celiyaan, noocyadu waxay u muuqdaan inay dhibaatooyin badan oo hawlgal ah soo mareen, wixii intaas ka sarreeyeyna waxaa lagu qasbay inay iibsadaan Apple Silicon cusub, oo hadda ah "rasmiga" ka hor 31 ee Maajo Haddii aadan rabin inaad lumiso lambarka $ 200 ee sicir-dhimista. Maxaa dhar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay soo celiyaan DTK Mac mini A12Z
Muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah waxay ku kici karaan $ 3000 waxayna qaadi karaan laba shaashadood oo 8K ah
Apple waxay la wadaagaysaa sheekada Bob March iyo sida uu noloshiisa u badbaadiyay Apple Watch